काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आजबाट दोस्रो चरणको जागरण अभियान सञ्चालन गर्दैछ। बिपी कोइरालाको १०६ औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर मंगलबार सुरुहुने हिमाल, पहाड, तराई–मधेश (हिपतम) जागरणको दोस्रो चरणको अभियानको कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली काग्रेसका केन्द्रीय पदाधिकारीले मुलुकका विभिन्न स्थानमा हुने सभालाई सम्वोधन गर्ने भएका छन्।
सभापति शेरबहादुर देउवाले सुनसरीको सभालाई सम्वोधन गर्ने तय भएको कांग्रेसले जनाएको छ। यसैगरी कास्कीमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
धनुषामा उपसभापति विमलेन्द्र निधि, सुनसरीमा उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, मकवानपुरमा महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, भक्तपुरमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, काठमाडौँमा कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव र सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।